စစ်တိုက်လေယာဉ်ပျက်ကျသေဆုံးသူမှာ ဗိုလ်ကြီးဟိန်းထက်အောင်ဖြစ်ပြီး…. – OK Media
February 16, 2022 Ok MediaLeaveaComment on စစ်တိုက်လေယာဉ်ပျက်ကျသေဆုံးသူမှာ ဗိုလ်ကြီးဟိန်းထက်အောင်ဖြစ်ပြီး….
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်ရေမျက်ကြီးအင်းတွင်ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ပျက်ကျသွားသော စစ်တိုက်လေယာဉ်မှူးမှာ လေ-၃၅၈၆ ဗိုလ်ကြီးဟိန်းထက်အောင် ဗိုလ်သင်တန်းအပတ်စဉ် ၅၁ ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် Operation Spitfire က ထုတ်ပြန်ထားသည့် ပြည်သူကို သတ်ဖြတ်နေသော စာရင်း
တွင် အမည်ပေါက်ပါဝင်သူဖြစ်သည်ဗိုလ်ကြီးဟိန်းထက်အောင်သည် တံတားဦးလေတပ်စခန်းမှဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော လပိုင်းကမှ မင်္ဂလာဆောင်ထားသူဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်
သူ့ကို တပ်ထဲမှာ ဂျာကြီး လို့ပဲခေါ်ကြတာသူကမင်္ဂလာဆောင်ထားတာမကြာသေးဘူကလေးမရှိသေးဘူးဟုတပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနက ပြည်သူများကို ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေသော လေတပ်မှ အရာရှိ
စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်လျက်ရှိရာတွင် ဗိုလ်ကြီးဟိန်းထက်အောင်သည် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပိုင်းလော့စာရင်းတွင် အမည်ပေါက် ပါဝင်သူဖြစ်သည်
စစ္တိုက္ေလယာဥ္ပ်က္က်ေသဆုံးသူမွာ ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းထက္ေအာင္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူကို သတ္ျဖတ္ေနေသာ ေလတပ္ပိုင္းေလာ့ စာရင္းတြင္ နာမည္ေပါက္ပါဝင္၊ မဂၤလာေဆာင္ၿပီး လပိုင္းအၾကာ ေသဆုံး
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ေရမ်က္ႀကီးအင္းတြင္ယေန႔ နံနက္ပိုင္း ပ်က္က်သြားေသာ စစ္တိုက္ေလယာဥ္မႉးမွာ ေလ-၃၅၈၆ ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းထက္ေအာင္ ဗိုလ္သင္တန္းအပတ္စဥ္ ၅၁ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ Operation Spitfire က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျပည္သူကို သတ္ျဖတ္ေနေသာ စာရင္း
တြင္ အမည္ေပါက္ပါဝင္သူျဖစ္သည္ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းထက္ေအာင္သည္ တံတားဦးေလတပ္စခန္းမွျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ လပိုင္းကမွ မဂၤလာေဆာင္ထားသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္
သူ႔ကို တပ္ထဲမွာ ဂ်ာႀကီး လို႔ပဲေခၚၾကတာသူကမဂၤလာေဆာင္ထားတာမၾကာေသးဘူကေလးမရွိေသးဘူးဟုတပ္တြင္းသတင္းရင္းျမစ္ကေျပာသည္ရန္ကုန္ေခတ္သစ္သတင္းဌာနက ျပည္သူမ်ားကို ဗုံးက်ဲတိုက္ခိုက္ေနေသာ ေလတပ္မွ အရာရွိ
စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိရာတြင္ ဗိုလ္ႀကီးဟိန္းထက္ေအာင္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပိုင္းေလာ့စာရင္းတြင္ အမည္ေပါက္ ပါဝင္သူျဖစ္သည္
စစ်တိုက်လေယာဉ်ပျက်ကျသေဆုံးသူမှာ ဗိုလ်ကြီးဟိန်းထက်အောင်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူကို သတ်ဖြတ်နေသော လေတပ်ပိုင်းလော့ စာရင်းတွင် နာမည်ပေါက်ပါဝင်၊ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး လပိုင်းအကြာ သေဆုံး
၃ လအတွင်း အနုပညာကြေးနဲ့ သိန်းထောင်ချီတန် ကားတစီးဝယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဆယ်လီဂွေးတို
ဒုက္ခရောက်စဉ်မှာ ကမ်းခဲ့တဲ့ ဒီလက်တွေကို ဘယ်တော့မှ မေ့မပစ်ဖို့ပြောလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို
ယူကရိန်းနဲ့အတူ ရပ်တည်ကြောင်း NUG ထုတ်ပြန်
႐ုရွား CDM စစ္သားေတြ .. ပထမေန႔မွာပဲ ယူနီေဖာင္းပါ အကုန္ထားၿပီး ေျပးတာ(ရုပ္သံ)
February 17, 2022 Ok Media